Vato nahaterahana volana aprily - loko diamondra - Vaovao farany 2021
Diamond ary rock quartz rock dia ny vato nahaterahana ho an'ny volana aprily araka ny lisitra taloha sy maoderina amin'ny loko vato aprily. Ny vatosoa tonga lafatra ho an'ny kavina apetaka aprily aprily
Inona no dikan'ny vato teraka April?
Ny vato teraka dia vatosoa izay mifandray amin'ny volana nahaterahana tamin'ny volana aprily: Diamond. Ny vato teraka tamin'ny volana aprily, diamondra, ankoatry ny maha-tandindon'ny fitiavana mandrakizay, dia noheverina fa hitondra herim-po.
Inona no lokon'ny vato teraka tamin'ny volana aprily?
Aiza no ahitana ny vato nahaterahana volana aprily?
Inona no firavaka kavina teraka tamin'ny volana aprily?
Aiza no hahitana vatosoa April?
Inona avy ireo famantarana ny zodiaka amin'ny vatosoa aprily?
Ny vato aprily dia matetika mifandray amin'ny colorless lokony. Izany no antony diamondra dia vatosoa tamin'ny volana aprily, nefa koa rock quartz rock, fotsy hoditra ary zicon fotsy
The diamondra dia vato niavian'ny nentim-paharazana tamin'ny volana aprily ary manana dikany lehibe ho an'ireo teraka tamin'io volana io, noheverina fa hanome fifandraisana tsara kokoa ho an'ny mpitafy ary fitomboan'ny tanjaka anaty. fanaovana diamondra dia lazaina fa hitondra tombony hafa toy ny fifandanjana, ny mazava ary ny habetsahany. Izy io koa dia tandindon'ny fitiavana mandrakizay, ary ireo sambatra miantso ny volana aprily ho volana nahaterahany dia hankafy ity tantara manaraka ity ao ambadik'io vatosoa tsy fahita firy io.
Ny vato nahaterahana ho an'ny volana aprily dia trandrahana erak'izao tontolo izao. Diamonds dia hita tany amin'ny firenena 35. Ireo firenena manaraka dia mamokatra kilasy indostrialy diamondra: Aostralia, Botsoana, Brezila, Sina, Kongo, Rosia ary Afrika Atsimo.
Izahay dia mivarotra kavina, fehin-tànana, kavina, rojo & maro hafa amin'ny aprily nahaterahana. Heverina ho iray amin'ireo vatosoa sarobidy indrindra eto an-tany, ny diamondra malaza sy manaitra mandrakizay.
Misy tsara diamondra amidy ao amin'ny fivarotanay
Ny vato aprily, diamondra, ankoatry ny maha-tandindon'ny fitiavana mandrakizay, dia noheverina fa hitondra herim-po. Ao amin'ny Sanskrit, ny diamondra dia antsoina hoe vajra, izay midika koa fa varatra; amin'ny angano hindoa, ny vajra no fiadian'i Indra, mpanjakan'ny andriamanitra.
Ny vato Aries sy Taurus dia vato samy hafa amin'ny aprily
Na inona na inona ianao Aries sy Taurus. Diamond dia ny vato manomboka amin'ny 1 aprily hatramin'ny 30.
Aprily 1 Aries Diamond
Aprily 2 Aries Diamond
Aprily 3 Aries Diamond
Aprily 4 Aries Diamond
Aprily 5 Aries Diamond
Aprily 6 Aries Diamond
Aprily 7 Aries Diamond
Aprily 8 Aries Diamond
Aprily 9 Aries Diamond
Aprily 10 Aries Diamond
Aprily 11 Aries Diamond
Aprily 12 Aries Diamond
Aprily 13 Aries Diamond
Aprily 14 Aries Diamond
Aprily 15 Aries Diamond
Aprily 16 Aries Diamond
Aprily 17 Aries Diamond
Aprily 18 Aries Diamond
Aprily 19 Aries Diamond
Aprily 20 Taurus Diamond
Aprily 21 Taurus Diamond
Aprily 22 Taurus Diamond
Aprily 23 Taurus Diamond
Aprily 24 Taurus Diamond
Aprily 25 Taurus Diamond
Aprily 26 Taurus Diamond
Aprily 27 Taurus Diamond
Aprily 28 Taurus Diamond
Aprily 29 Taurus Diamond
Aprily 30 Taurus Diamond
Ny vato nahaterahana volana aprily voajanahary dia amidy ao amin'ny fivarotana vatosinay
Izahay dia manao firavaka vita tamin'ny vato nateraka tamin'ny volana aprily ho toy ny peratra fifamatorana, rojo, kavina vita amin'ny Stud, fehin-tànana, pendant… Azafady Mifandraisa aminay isaky ny teny.